Isu tinoongorora basa raLeopoldo Maiwe "Clarín": La Regenta | Zvazvino Zvinyorwa
Isu tinoongorora basa raLeopoldo Maiwe «Clarín»: La Regenta
Leopoldo Nhamo «Clarín» akaberekerwa muZamora muna 1852 ndokufira muOviedo muna 1901. Aive murume mweya wakavhurika, akasununguka, anticlerical uye republican. Akagara kwemakore mashoma muMadrid, kunyanya pakati pa1871 na1882; ipapo aigona kusangana ne "Krausist" nharaunda. Kubva 1883, aishanda paUniversity yeOviedo, kwaaive Muzvinafundo weMutemo.
Pamusoro pekunyora zvinyorwa, Clarín akanyora zvinyorwa zvemapepanhau, nyaya, ... Akanyora rimwe remabasa anoshamisa muSpain: "The Regent". Mariri, maitiro ekudzikira kwetsika kwaAna Ozores anorondedzerwa munzvimbo yakavharika yeVetusta, guta reruwa rinomiririra Oviedo.
2 Maumbirwo enhoroondo
3 Hunhu uye kusawirirana
4 Mazhinji anomiririra maficha
Munyori we "The Regent" anozvibata semunhu ari pamusoro pezvisikwa zvake, waanoziva zvirinani kupfuura ivo. Ane hunhu hwese anoziva uye, kunyangwe izwi rake richinzwika zvakananga, anodzivisa kuzvifananidza nevanyori. Nenzira iyi, inozviratidza isina kwayakarerekera mune yayo ideology, dzimwe nguva inowanikwa kubva pakuona, iyo inosanganisira kushandisa pfungwa dzevamwe kuratidza hunhu isati yaunzwa munoverengeka. Nenzira iyi, anoratidzwa kubva kwakasiyana maonero.
Su chimiro chemukati rakakamurwa Zvikamu zviviri. Yekutanga yavo (inoenda kubva pachitsauko I kusvika XV), inoitika mumazuva matatu uye inonyanya kubata nekuratidzwa kwevatambi uye nharaunda Kubudikidza neyemukati monologue yevatambi, munyori anodzosera zvakapfuura zvake kumuverengi (hudiki, kuyaruka kwaAna, zvishuwo uye hudiki hwaDon Fermín, nezvimwewo). Kune rimwe divi, chikamu chechipiri (kubva pachitsauko XVI kusvika kuXX) chinotarisa kusimudzira kwekukonana kwakanongedzwa muchikamu chekutanga: Hukama hwaVetusta naAna, hwaDon Fermín naVetusta uye hwaAna naMagistral. Iyo inoratidzirwa nekuita, uye kwechinguva inotenderera kubva muna anotevera Mbudzi kusvika Gumiguru makore matatu gare gare.
Iyo inoverengeka inotanga nekunetsekana mu protagonist yayo, uyo akabvaruka pakati pesimba iro iro guta rinomupa (anomiririrwa naDon Álvaro) uye iro rinomiririrwa nekuvapo kweMagistral. Gare gare, Ana anopokana nekudyiwa kweizvi uye anonamira kuna Álvaro Mesía, zvinoreva kuti kudonha kwemunhu mukuru mu chivi choupombwe uye mhedzisiro yacho njodzi munharaunda.
Chimiro chayo chakatenderera, nekuti chakavakwa zvine mutsindo uye chinotora zvinhu kubva pakutanga mune zvadzinogumira: kutanga uye kupera kunowanikwa muna Gumiguru uye muchechi yepamusoro.
Hunhu uye kusawirirana
Mutambo une mavara anopfuura zana, ine nyika yakapfuma uye yakabatana zvakakwana. Pakati pezvose, zvinotevera zvinomira pachena:
Ana Ozores, protagonist, iyo Regenta. Mudzimai mudiki weakarega basa Regent weVateereri, Don Víctor Quintanar, waasingade. Iye mukadzi ane hunhu hunoshungurudzwa, husina kunaka uye husina kugutsikana nehupenyu hwake. Kunyangwe izvi, iye hunhu hunoyemurwa uye kugodorwa nevamwe vakadzi nekuda kwerunako rwake uye nehunhu husina mhosva.
Don Fermin de Pas, the magisterial canon, Ana's confessor.Iye murume anoda chinzvimbo uyo anoti ane mumaoko ake simba rekutonga guta rese, kunyanya Ana Ozores, iyo Regenta. Don Fermín anoita nenzira yakaipa, nekuti anofunga kuti Ana ndewake uye anotombozvibata semurume pane dzimwe nguva, achidanana naye.
Don Alvaro Mesia, ndiyo hunhu iyo Regenta inowira murudo nayo. Iye ari nyore mukundi, anozvidzwa uye akashata munhu. Don Álvaro haakwanise kumupa iye hupenyu hwaanoteedzera: ndiye mumwezve nhengo yeVetusta uye anomiririra hunyengeri uye husiri-hwekushuvira nzanga inosunda nekukweva protagonist.
Mazhinji anomiririra maficha
Iri basa rakanzwisiswa semumiriri weiyo kuora mwoyo kwemunyori, iyo inozviratidza kuburikidza neayo protagonists. Mariri, kuora mwoyo munyika uye kutadza kwerudo seruponeso rwemweya zvinoratidzwa. Iwe unotarisana nezvamunoda kuva uye zvaunazvo. Saizvozvowo, inoverengeka inoita kushoropodzwa kwenhema kuripo munharaunda, pane iyo munyori anoburitsa kutsamwa kwake: hunhu hunorumbidzwa uye pachinzvimbo chivi chevamwe chinodiwa, vatambi vanoedza kunyepedzera zvavasiri, nezvimwe. Nenzira iyi, La Regenta zvese kusekesa uye mutambo: kune rumwe rutivi isu tine mutambo weVetusta, unoonekwa kubva kumusoro, uye kune rimwe kune nhamo yaAna Ozores, inoongororwa zvakadzama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Isu tinoongorora basa raLeopoldo Maiwe «Clarín»: La Regenta
Kuti vechidiki vaimbofa munguva yakapfuura, ndiLeopoldo uyo asina kana kusvika makumi mashanu, mumwe akangwara wandinoyemura zvakanyanya, Jaime Balmes zvimwechetezvo, tenda runako kuti vakasiya chisikwa chine zvibereko kufadza isu vedu vaive vasina kuzvarwa vaine tarenda rakawandisa, asi nekutenda? Fungidzira ava vakangwara vangadai vakave netariro yazvino, mangani mamwe matombo angadai vakatisiya? ...